Inqola yesitimela yomlando (ayikho imali yokuhlanza)
(312 okushiwo abanye)
Marsden, West Coast, i-New Zealand
Isitimela ibungazwe ngu-Sarah And David
Isitimela izoba ngeyakho wedwa.
Indawo yokuhlala eyingqayizivele, engokomlando, enokuthula futhi eyimfihlo imizuzu eyi-15 eseNingizimu yeGreymouth, imizuzu emi-2 ukushayela ukuya eShantytown kanye nemizuzu emi-5 ukushayela umzila womjikelezo weWilderness. I-Te Pahika (i-runaway) - yaqala yakhiwa ngo-1907 njengeveni yonogada futhi yaphahlazeka e-Moana ngo-1963. Yabaleka ngempela. Ibekwe ekugcineni kude kwechibi elikhulu endaweni eseceleni enehlathi langemuva eliluhlaza, ukushona kwelanga, ingoma yezinyoni echichimayo kanye nezilwane zasendle zendawo. U-Te Pahika uthembisa ukukunikeza ukuhlala okuphumuzayo nokunokuthula.
Kuyinjabulo yethu ukwabelana nawe nge-Te Pahika. Ingenye yezakhiwo ezingokomlando, ehluke kakhulu kunemotela noma igumbi lehhotela. Lapha unendawo egcwele yokuzikhethela eziqukethe/yokupheka enikeza ukuhlala okuyingqayizivele nokunokuthula. Endaweni ethile lapho ungaphumuza khona futhi uphumule kude nokuphithizela kwansuku zonke komhlaba wesimanje wezobuchwepheshe, lapho ungajabulela khona ukuba seduze nehlathi nemvelo yasoGwini lwaseNtshonalanga, ngezinto ezihlala e-rustic nokho ukunethezeka kwesimanjemanje. Inqola eyinhloko inombhede wendlovukazi okhululekile owenziwe ngesitayela saseYurophu, ngengubo kagesi (ekhishwe phakathi nezinyanga zasehlobo), indawo yokuhlala yokuphumula ebheke echibini elikhulu kanye nendawo encane yokugqoka enendawo yokugcina imithwalo.
Ngaphesheya kompheme ombozwe kancane "wesiteji" uzothola isakhiwo esakhiwe "isiteshi sesitimela" esihlala ikhishi elihlome ngokuphelele elinendawo yokupheka yegesi engu-2, i-microwave nesiqandisi esincane kanye negumbi lokugezela lesimanje elineshawa, usinki nendlu yangasese.
Ngaphandle ubekwe ngokumelene nehlathi uzothola indawo yokugeza yangaphandle e-rustic enamanzi ashisayo uma ifunwa
U-Te Pahika akanayo i-TV - Sinayo i-wi-fi yamahhala esikucela ukuthi uyisebenzise ngokuzibophezela.
Ukuze uthole ukunethezeka nokunethezeka ngesikhathi sokuhlala kwakho uzothola isomisi sezinwele, amachweba weshaja ye-usb enentambo eqinile, izingubo zokulala eziyisipele, omata bamadolo - kulabo ababuka izinkanyezi ezibandayo zasebusuku kanye nokunye okwengeziwe okumbalwa okungeziwe.
Indawo esuka endaweni yokupaka izimoto futhi ezungeze inqola yesitimela isendleleni ukuze kube lula kuwe -
Ukwazisa ngokugcwele i-Te Pahika kanye nokuthula nokuthula kwayo ukuhlala ebusuku okuningi kuyanconywa.
Asikukhokhisi imali yokuhlanza futhi sikucela ukuthi uyishiye indawo njengoba uyitholile.
isiqandisi esiyi-This fridge is a small under the bench style
4.98(312 okushiwo abanye)
4.98 · 312 okushiwo abanye
I-Shantytown iyimizuzu emi-2 ukusuka endaweni yethu. I-Paroa iqhele ngemizuzu emi-5 ukusuka endaweni yethu lapho kukhona indawo yokucima ukoma yasendaweni ephakela ukudla kwakusihlwa kanye nesitolo sobisi sezinto ezibalulekile noma mhlawumbe u-ayisikhilimu noma i-milk shake. I-Paroa futhi yilapho ungathatha khona umzila womjikelezo we-Wilderness. Ukuqhubekela phambili kancane komgwaqo obheke eNyakatho kunesitolo sobisi esihlanganisiwe nezinhlanzi nama-chip, (ama-J's amane) - inketho enhle kakhulu ogwini olusentshonalanga kusihlwa libalele ukuze ubuke ukushona kwelanga ogwini, udla izinhlanzi namashidi aphuma ephephandabeni : ) Ezinye izindawo zokudlela zitholakala eGreymouth okuyindawo ecishe ibe yimizuzu eyi-12 ukuya kweyi-15 ukusuka endaweni yethu.
Ibungazwe ngu-Sarah And David
Ubuhle be-Te Pahika ukuthi izimele, ingasese futhi iyimfihlo, ngakho-ke ngeke sikuphazamise ngesikhathi sokuhlala kwakho.
Uma kukhona okudingayo noma ungathanda iseluleko noma ukubuza umbuzo sicela usithumelele umyalezo noma usishayele ekuqaleni njengoba uDavid esebenza ngamashifu futhi ngezinye izikhathi ulala emini.
Ngezinye izikhathi ungase usibone seza izimvu ezivela endaweni yokupaka eseduze nensimu ezihlala kuyo eduze kwaseTe Pahika.
Uma kukhona okudingayo noma ungathanda iseluleko noma…
USarah And David Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Marsden namaphethelo